UKUBUKEZA I-BLACK DIAMOND CASINO YE-INTHANETHI NEYESELULA
Amakhasino Emali Yangempela
Amakhasino Emali Enkulu
Isibuyekezo se-SPRINGBOK Casino
Isibuyekezo se-Yeti Casino
Isibuyekezo se-Rich Casino
Isibuyekezo se-Box24 Casino
Isibuyekezo se-African Grand Casino
Isibuyekezo se-Mega Casino
Isibuyekezo se-Jackpot Cash Casino
Amakhasino E-inthanethi Ediphozithi Engekho
Amakhasino Eselula Amasha
Amakhasino Eselula Abadayisi Ababukhoma
Ibhonasi Yekhasino Ngerandi
Amabhonasi e-Free Spins
Ama-Slots Emali Yangempela
Ama-Progressive Jackpot Slot
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-black diamond casino
Isibuyekezo se-Black Diamond Casino
Isofthiwe:Rival, Betsoft, Parlay Games
Usizo: 24/7, 24/7 customer support through email, 24/7 Live Chat, Complaints Section
Ibhonasi Lokukwamukela:R75,000 Ibhonasi Lokukwamukela
25 Ama-Free Spins
I-Black Diamond Casino ingelinye lamakhasino e-inthanethi amadala atholakala kubadlali baseNingizimu Afrika. Inikeza abadlali imidlalo eminingi ehlukene, kubandakanya imishini yokugembula yevidiyo kuya kumidlalo yetafula ebukhoma enikezwayo. Kukhona namanye amabhonasi wokukwamukela, anikeza abadlali ithuba lokukhulisa imali yabo nokuthi badlale isikhathi eside.
Futhi kukhona usizo lwamahora angu-24 olutholakala izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Lokhu kusho ukuthi noma yiziphi izinkinga zingaxazululwa ngokushesha. Yini enye i-Black Diamond ayinikeza abadlali? Sesibhekisise kahle ukubona ukuthi yini etholakalayo.
AMABHONASI OKUKWAMUKELA KA-2020 E-BLACK DIAMOND
Dlala mahhala izikhathi ezingu- Ngesikhathi ubhalisa, abadlali banikezwa izikhathi zokudlala ezingu-25 kungadingeki ukuthi babheje imali.
Ibhonasi yediphozithi lokuqala U-200% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R20,000 nezikhathi zokudlala ezingu-30
Ibhonasi yediphozithi lesibili U-250% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R25,000 nezikhathi zokudlala ezingu-50
Ibhonasi yediphozithi lesithathu U-300% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R30,000 nezikhathi zokudlala ezingu-30
AMAKHODI EBHONASI YEDIPHOZITHI ENGEKHO E-BLACK DIAMOND
Awekho amakhodi adingekayo ukuze uthole ibhonasi yediphozithi engekho e-Black Diamond Casino. Abadlali banikezwa izikhathi zokudlala ezingu-25 ngenxa nje yokubhalisa. Azikho izidingo zokuthi ubheje imali kulezo zikhathi zokudlala ezimahhala futhi ungakwazi ukukhipha imali uma uwinile. Ungawina inani elifika ku-R1,000 kuphela uma udlala ungafakanga idiphozithi.
AMANYE AMAPHROMOSHINI AKHETHEKILE ANIKEZWA I-BLACK DIAMOND
I-Black Diamond inikeza abadlali amaphromoshini amaninigi ahlukene. Kunamabhonasi ansuku zonke kanye namanye amaphromoshini ashintshayo, kubandakanya imiqhudelwano. Nasi isifingqo salokhu okutholakala lapha:
Magnificent Monday Kunamaphromoshini amaningi akhona, futhi amadiphozithi ka-R2,000 noma phezulu athola u-200% kumabhonasi alinganayo
High-Stakes Tuesday Amabhonasi ediphozithi andisa amaphesenti ngesikhathi inani lediphozithi likhula
Wonderful Wednesday Wonke amadiphozithi ka-R1,000 noma phezulu athola ingonasi elinganayo. Uma idiphozithi likhula, inani lamaphesenti liyakhula
High-Stakes Thursday Iphromoshini elifana nalelo elitholakala ngoLwesibili
Full House Friday Wonke amadiphozithi ka-R2,000 noma phezulu athola u-250% kumabhonasi alinganayo
INDELA YOKUNGENA NGEMVUME NOKUBHALISA KU-INTHANETHI E-BLACK DIAMOND
Ukungena ngemvume nokubhalisa e-Black Diamond Casino kulula kakhulu. Inkinobho yokungena ngemvume ibhalwe ngokusobala futhi itholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini. Lokhu kukwenza kube lula kakhulu ukungena ngemvume. Uma usungenile, iwebhusayithi lisebenza ngokushesha, ukuze kuqiniseke ukuthi azikho izinkinga mayelana nejubane lewebhusayithi.
Ukubhalisa ngenye into elula ukuyenza. Inkinobho ethi ‘joyina manje’ iseceleni kwenkinobho yokungena ngemvume. Yichofoze nje bese ukhonjiswa indlela yokubhalisa. Vele ufake imininingwane yakho uzobe usulungele ukudlala masinyane.
IMIDLALO YEKHASINO ONGAYIDLALA KU-INTHANETHI E-BLACK DIAMOND
Dlala i-Video Poker
Izinhlobonhlobo Zemishini Yokugembula
Kunemidlalo engaphezulu kuka-200 yokugembula yevidiyo etholakala kubadlali e- Black Diamond Casino. Le midlalo inikezwa ngabahlinzeki abanamagama amakhulu njengo-Betsoft no-Pragmatic Play. Kuhlala kunemidlalo yokugembula yevidiyo lapha engajatshulelwa ngabadlali.
Imishini yokugembula ejwayekile njenge-Wolf Gold ne-The True Sheriff ihambisana nemidlalo yokuwina isizumbulu semali njenge-Glam Life ne-Greedy Goblins. Kungakhathaliseki uhlobo lwemidlalo yokugembula yevidiyo oyithandayo, kuzoba nokuthile okukufanele lapha e- Black Diamond.
Imidlalo Yakho Yetafula Ejwayelekile
Imidlalo yetafula e-Black Diamond inhle ngokulinganayo. I-Roulette, i-blackjack, i-baccarat ne-keno konke kumbozwe kulesi sigaba, futhi kunezinhlobo ezehlukene ongazizama. Uma ufuna isipiliyoni sekhasino sangempela ungajabulela izinhlobo eziningi zemidlalo ezinom. Esigabeni sabadayisi ababukhoma, kunikezwa i-blackjack ne-roulette kokubili, ukuze abadlali bathole isipiliyoni sekhasino sangempela besemakhaya abo.
Eminye Imidlalo Ekhona
Abadlali bangajabulela isigaba esikhulu se-poker yevidiyo e-Black Diamond. Lapha kunanagama ahlukene e-poker yevidiyo ongawadlala, futhi anemithetho nokukhokhela okwehlukile. Ungajabulela i-Joker Poker, i-Jacks noma i-Better kanye nezinye izinhlobo uma udlala e-Black Diamond.
I-BLACK DIAMOND IQHATHANISEKA KANJANI KUSELULA?
Iwebhusayithi ye-Black Diamond Mobile lakhiwe kahle kakhulu. Livula ngejubane elifana nelewebhusayithi elikukhompyutha futhi lisebenza cishe nawo wonke amaskrini kungakhatheliseki ukuthi makhulu kangakanani. Lihlelwe ngendlela efanayo newebhusayithi elikukhompyutha, lokhu kusho ukuthi abadlali abajwayele ukudlala ngekhompyutha bangashintsha kalula.
Bobabili abadlali be-Android nabe-Apple bangajalulela i-Black Diamond kumadivayisi abo eselula, okwenza itholakale kuniningi lemakethe. Mayelana nemidlalo etholakalayo, i-90% yemidlalo ekuwebhusayithi elikukhompyutha iyatholaka kuwebhusayithi elisefonini. Lokhu kusho ukuthi abadlali bangajabulela imidlalo engaphezulu kuka-200 behamba.
NGINGAKWAZI UKUDAWUNILODA I-YETI CASINO ESELULENI YAMI?
Alukho uhlobo lwe-Black Diamond Casino olungadawunilodwa ngabadlali. Lokhu kusho ukuthi kudingeka i-inthanethi esheshayo ukuze udlale imidlalo yase-Black Diamond kahle.
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUKHIPHA IMALI E-BLACK DIAMOND
Kuyatholakala Kubadlali base-SA?
ecoPayz Yebo Lapho uyikhipha
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUDIPHOZITHA IMALI E-BLACK DIAMOND
Visa/Mastercard Yebo Lapho uyikhipha
Easy EFT Yebo
INKAMPANE YE-BLACK DIAMOND NEMINININGWANE YOKUXHUMANA
Isungulwe: 2009 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA:: 27-0-800-780-012
Umphathi ngu: Deckmedia N.V. I-imeyili : [email protected]
Ilayisense ngeyase: Curacao, Netherlands Antille Ingxoxo esheshayo: Yebo
Uhlobo Ongaludawuniloda: Cha Usizo lwe-24/7/365: Yebo
Uhlobo Ongakwazi Ukuludawuniloda: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
UBUHLE NOBUBI BE-BLACK DIAMOND
Miningi imidlalo etholakalayo, kunemidlalo engaphezu kuka-300 ekhona ngokhuphelele
Kunosizo lwamakhasimende lwe-24/7
Kunamabhonasi namaphromoshini amaningi
Iwebhusayithi lihlelwe kahle futhi kulula ukulisebenzisa
Ukuphepha e-Black Diamond kuyafana nezinga lemakethe
Ayimningi imidlalo ebukhoma ongayikhetha
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali zithi ubheje ibhonasi kanye nediphozithi
Ingabe i-Black Diamond isemthethweni eNingizimu Afrika?
I-Black Diamond Casino isemthethweni eNingizimu Afrika. Iqondiswa nguhulumeni wase-Curacao nowase-Netherlands Antilles.
Ngiyikhipha kanjani imali ku-Black Diamond?
Hamba esigabeni se-akhawunti yakho ngemuva kokungena ngemvume. Ngemva kwalokhu uzokwazi ukuyikhipha imali. Okwamanje kusebenza i-ecoPayz kuphela kubadlali baseNingizimu Afrika.
Yini i-Black Diamond?
I-Black Diamond yikhasino ye-inthanethi evumela abadlali base-Ngingizimu Afrika bakwazi ukudlala imidlalo eminingi yekhasino. Isemthethweni ngokuphelele inikeza amaphromoshini amaningi.
Ubani umnikazi we-Black Diamond?
I-Black Diamond Casino ngeka-Deckmedia NV futhi iphethwe yibona.
Ingabe i-Black Diamond inezici zokubheja ezemidlalo?
Okwamanje uwukwazi ukubheja ezemidlalo. Ilinki lemijaho kukhasi lasekhaya kuwebhusayithi alinikezi umjaho we-inthanethi, kodwa likusa kumqhudelwano lapho abadlali abazama ukuthola amathuba okudlala umshini wokugembula yevidiyo ukuze bawine imiklomelo.
Ingabe i-Black Diamond inikela ngohlelo lwabantu ababaluleke kakhulu (VIP)?
Okwamanje kunekilabhu ye-VIP e-Black Diamond Casino. Livumela abadlali bathole ithuba lokuthola imivuzo eyehlukene kubandakanya ukheshi namaholide emhlabeni jikelele. Kunamazinga amahlanu e-VIP futhi izinga ngalinye linikeza abadlali eminye imivuzo nezici zokusebenzisa.
Ziyini izidingo zokubheja e-Black Diamond ukuze ukhiphe imali?
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali e-Black Diamond zithi kufanele ubheje inani lediphozithi nebhonasi izikhathi ezingu-35 ukuze ukhiphe imali. Ngakho-ke, ngemuva kokuthola ibhonasi lokukwamukela, umdlali owadiphozitha u-R100 uzothola ibhonasi ka-R200. Lokhu kusho ukuthi umdlali uno-R300 e-akhawuntini yakhe. Lelo nani kuyomele lidlalwe izikhathi ezingu-35, Ngakho-ke kuyomele kubhejwe u-R10,500 ukwanelisa izidingo zokubheja.
Amabhonasi Ekhasino Ahamba Phambili!
Thola amaphromoshini amasha ngesonto njalo ku-inbox yakho
Amaphromoshini angcono kakhulu asendleleni aya ku-inbox yakho!
+18 I Inqubomgomo Yemfihlo. I Ukugembula Okulungile
Ukugembula kungakwenza ukuthi ube yisigqila sakho. Dlala ngokunakekela.
Mayelana nokuKhangisa: Iwebhusayithi yethu iqukethe izixhumanisi noma ama-link akhokhelwe abantu esisebenzisana nabo. Ngokuchofoza kunoma yikuphi kwalaba bantu, i-Onlinecasinosonline ingathola ikhomishini.
Sibhala phansi kuphela amakhasino APHEPHILE.
Ucingo losizo: 0800 006 008
I-Copyright © 2021 OnlineCasinosOnline.co.za. Sigcina Wonke Amalungelo.
Bheka amabhonasi amahle kakhulu wekhasino
R350 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
+ R11, 500 Ibhonasi Lokukwamukela
R200 Mahhala ayikho ibhonasi yediphozi
+ 200% Ibhonasi ne 50 Izikhathi Zokudlala Mahhala
R100 iBhonasi Lamahhala
+ R24,000 Ibhonasi Lokukwamukela